ခရစ်ယာန်ဒီမိုကရေစီမွေးမြူယုံကြည် | Apg29
578 online! | Sidvisningar idag: 78 877 | Igår: 192 970 |
ရသောအခါယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကယျတငျတျောမူခွငျးနှငျ့ဘုရားသခငျ၏ရှိသောအသင်းတော်နှင့်တကွကြွလာ, သင်ကအာဏာရှင်စနစ်သို့ဝငျ, ဒါပေမယ့်ဒီမိုကရေစီကိုမမည်! 1 ကောရိန်သု 14:26 ဘယ်လိုကြောင့်, ညီအစ်ကိုများကိုဖြစ်လိမ့်မည်နည်း သငျသညျစည်းဝေးကြသောအခါကောင်းပြီ, အသီးအသီး, တစ်ဦးဆာလံပေးဖို့တစ်ခုခု, တစ်ဦးဆုံးမဩဝါဒရှိပါတယ်, တစ်ဦးကိုသိခြင်း, တစ်ဦးလျှာကိုရှိပါတယ်သည့်အနက်ရှိတယ်။ အရာအားလုံးတည်ဆောက်ခြင်းအလိုငှါအဘို့ဖွစျပါစေ။	ဒါဟာအာဏာရှင်စနစ်လိုလားသောမာရ်နတ်သည်။ သူကလူတွေကိုချည်နှောင်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်လိုသည်။ ဘုရားမဖြစ်။ ဘုရားသခင့အခမဲ့လူသတ်မှတ်ထားဖို့လိုသည်!ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းအားဒီမိုကရေစီကိုဖန်တီးပေးဒါဟာရှိတစ်ဦးပြန်လည်ခဲ့ကြောင့်လည်းဒီမိုကရေစီဖြစ်လာသည်ဘယ်မှာလူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြသည့်နေရာတွင်ဒါကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေရှု၌ယုံကြည်ခြင်းအားဒီမိုကရေစီမပါဘဲတစ်ဦးအာဏာရှင်စနစ်ဖန်တီးပါဘူး!ယရှေုသညျတနျခိုးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်, ငါသညျယရှေုအားလုံးတနျခိုးရှိကြောင်းသိပေမယ့်သူကအာဏာကိုအလွဲသုံးစားနှင့်အာဏာရှင်ဖြစ်ပါတယ်မထားဘူး။ သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောနှင့်ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကိုသို့လာကြသောအခါ, သငျသညျလွတ်လပ်မှု, မထောင်ဒဏ်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဲဒါကိုကျန်းမာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းရဲ့သံသယဖြစ်ပါတယ်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုသို့ရမယ်ဆိုတာသည်။သငျသညျအဘယျသို့အသင်းတော်ကိုရှေးခယျြလိမ့်မည်နည်းသငျသညျယရှေုကိုတယောက်တည်းသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်သည်အဘယ်မှာရှိဘုရားကျောင်းကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်!စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဥပမာဒီမိုကရေစီအမိန့်ညျဘုရားသခငျ၏အသငျးတျောတှငျပြံ့နှံ့လာသောအခါတမနျတျော 15 ခုနှစ်တွင်, 35 1 မှကျမ်းပိုဒ်တစ်စိတ်ကူးနမူနာဖြစ်ပါသည်။ 15: 1 တချို့ကယောက်ျားတို့သည်မောရှေ၏ထုံးစံအရသိရသည်ရေဖျားလှီးခြင်းကိုမသွားပါစေခဲ့ပါလျှင်ထိုသူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ကြောင်းကိုညီအစျသင်ပေးဖို့စတင်ခဲ့ယုဒပြည်မှဆင်းလာကြ၏။2ထိုအခါကမညီညွတ်မှုတိုးကြီးနှင့်ပေါလုနှင့်ဗာနဗသူတို့ပေါလုနှင့်ဗာနဗနှင့်ထိုသူအချို့တို့သည်ဤကိစ္စကိုမှယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောတမန်တော်တို့နှင့်လူအကြီးအကဲအထိသွားလာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, သူတို့နှင့်အတူပြင်းထန်သောအငြင်းပွားမှုအတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။3ညီလာခံခရီးစဉ်အဘို့ထိုသူတို့တပ်ဆင်ထားပြီး, သူတို့သည်ဖိနိနှင့်ရှမာရိအားဖြင့်ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီမှာသူတို့ကျယ်ကျယ်တပါးအမျိုးသားတို့ပြောင်းလဲခြင်းသို့ပြောသည်နှင့်ညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့အကြားအလွန်ဝမ်းမြောက်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါ 4, သူတို့ပရိသတ်အများနှင့်တမန်တော်တို့နှင့်လူအကြီးအကဲအားဖြင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်, သူတို့သညျဘုရားသခငျသူတို့ကိုအားဖြင့်ပြုသမျှအရာအားလုံးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုကပြောကြားခဲ့သည်။5သို့သော်ယုံကြည်သောသူအဖာရိရှဲတို့သည် '' ပါတီအခြို့ကိုရှေ့သို့ရောက် လာ. တတပါးအမျိုးသားတို့အရေဖျားလှီးခြင်းကိုရမယ်နှင့်မောရှေ၏ပညတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်ရန်သူတို့ကိုအမိန့်ကိုကဆိုသည်။6တမန်တော်တို့နှင့်အကွီးအကဲမြားကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ပြီးတော့စုဝေးကြ၏။
7 ရှည်လျားသောဆွေးနွေးပြီးနောက်, ပေတရုထသူတို့ကို said: ။ "ညီအစ်ကိုတို့, သငျသညျဘုရားသခငျသညျရှေးကာလတပါးအမျိုးသားတို့သည်ငါ့နှုတ်အားဖြင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်နှင့်ယုံကြည်သင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကွောငျးသိရ 8 တဖန်ဘုရားသခင်က, နှလုံးသိရှိသူသည်သက်သေခံလေပြီ သူတို့ကိုထိုသူတို့အားအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ပေးခြင်းအားဖြင့်။9သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်းသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေသောအခါထိုကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့နှင့်ခြားနားစေ၏။ 10 သင်သည်ဘုရားသခင်၏စိန်ခေါ်နှင့်သောငါတို့ဘိုးဘေးကိုတပည့်တော်တို့၏လည်ပင်းပေါ်မှာတင်သောထမ်းဘိုးကိုမထားချင်ကြဘူးအဘယ်ကြောင့် ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမ, ကျနော်တို့ကသခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြောင်းယုံကြည်? 11 မခံနိုင်ခဲ့ကြ, ကျနော်တို့သူတို့ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်ပါ။ "
12 ထိုအခါပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာ နေ. ခဲ့သည်, သူတို့ဘယ်လောက်ကြီးစွာသောပုပ္ပနိမိတ်နှင့်ဘုရားသခင်၏တပါးအမျိုးသားတို့သည်သူတို့ကိုတပါးအမျိုးသားတို့တွင်တဆင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့, အံ့ဘွယ်သောအသို့ပြောသည်သောဗာနဗနှင့်ပေါလုစကားကိုနားထောငျ။ 13 သူတို့စကားပြော, ယာကုပ်ကပြောပါတယ်ပြီးဆုံးခဲ့သည့်အခါ: ။ "ညီအစ်ကိုတို့, ငါ့စကားကိုနားထောင် 14 ရှိမောင်ဘုရားသခငျသညျပထမဦးဆုံးသူတပါးအမြိုးသားတို့တှငျမိမိနာမအဘို့လူစုအနိုင်ရတာသေချာပါလုပ်ပုံကိုဖော်ပြခဲ့သိရသည် 15 ကမျြးစာလာသည်အဘယ်မှာရှိဤပရောဖက်တို့၏စကားနှင့်ကိုက်ညီသည်။ :
16 ထိုအခါငါသည်ဒါဝိဒ်၏လဲတဲကိုပြန်လာကြနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရလိမ့်မည်။ ငါက၎င်း၏အပျက်အယွင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ကြောင့်ထူထောင်အပေါင်းတို့, အခြားလူတို့အဘို့ 17 ထာဝရဘုရားကိုရှာ, ငါ၏နာမကိုအမှီဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ပြီးသောကျော်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုသင့်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ဤကမ္ဘာဦး မှစ. လူသိများ 18 ပြုသောသူထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ 19 ထိုကွောငျ့, ငါငါတို့သည်ဘုရားသခင်အားလှည့်အဘယ်သူသည်တပါးအမျိုးသားတို့သည်အဘို့ခက်ခဲပါစေ 20 ရှိသောမတရားသောမေထုန်မှ, လည်ပင်းညှစ်တိရစ္ဆာန်များ၏အသားကနေနှင့်အသွေး မှစ. , ပယ်ရှားရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်မစင်ကြယ်သောဖြစ်လာကြပြီအမှုအရာမှစောင့်ရှောက်ရန်သူတို့ကိုရန်မရေးပါသင့်ကြောင်းယုံကြည် ။ ရှေးခေတ်ကကတည်းက 21 Moses've အားလုံးအမြို့မြို့၌မိမိတို့တရားဟောဆရာခဲ့, ထိုတရားစရပ်၌ဥပုသ်နေ့သူ့ကိုစာဖတ်ခြင်း။ "
22 ထိုအခါအကွီးအကဲမြားနှငျ့အတပြင်လုံးကိုအသင်းတော်ကိုတမန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အချင်းချင်းမှလူတခြို့ကိုခနျ့အပျနဲ့ပေါလုနှင့်ဗာနဗနှင့်အန္တိအုတ်မြို့သို့သူတို့ကိုစလှေတျဖို့။ သူတို့က, ယုဒ Barsabas နှင့်သိလထို့အပြင်လို့ခေါ်တဲ့ညီအစ်ကိုတို့တွင်အနှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်ယောက်ျားကို ရွေးချယ်. 23 သူတို့နှင့်အတူအောက်ပါစာတစ်စောင်ကိုစလှေတျ:
"တမန်တော်တို့နှင့်လူအကြီးအကဲ မှစ. သင်တို့ညီအစ်ကို။ အန္တိအုတ်မြို့သို့နှင့်ဆီးရီးယားနှင့်ကိလိကိပွညျ၌အတပါးအမျိုးသားတို့အထဲကညီအစျကိုမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏။ 24 ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုမှလာသောအချို့သောသူတို့၏စကားအားဖြင့်သင်တို့ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြပြီငါကြားရပြီ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပေးထားကြပြီမဟုတ် မည်သည့်တာဝန်ကို။ 25 ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့တညီတညွတ်တည်းထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယုဒနှင့်သိလတို့ကိုပေးပို့ 27 ။ အချို့သောလူတို့သညျကိုခနျ့အပျနှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဘို့မိမိတို့လည်ပင်းကိုချထားသောသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်လှစွာသောညီအစ်ကိုညီဗာနဗနှင့်ပေါလု, 26 နှင့်အတူသငျသညျသူတို့ကိုစလှေတျဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, သူတို့သည် နှုတ်ဖြင့်အတူတူပင်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
28 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ကျွန်တော် 29 သငျသညျအသှေးကိုမှ, လည်ပင်းညှစ်တိရစ္ဆာန်များ၏အသားနှင့်မတရားသောမေထုန်မှ, ရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောယဇ်ကွာအသားကနေစောင့်ရှောက်သော: သင်တို့အပေါ်၌, ဤလိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကလွဲပြီးမပိုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကို တင်. ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီ။ သင်ကိုရှောင်ကြဉ်လျှင်သင်ျာဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးကောင်းသော! "
အသက် 30 သူတို့ကယခုလွှတ်လိုက်ကြပြီးအတူတကွအသငျးတျောကိုစုဝေးစေနှင့်စာတစ်စောင်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဘယ်မှာအန္တိအုတ်မြို့သို့မှဆင်းလေ၏။ 31 ညီအစျကိုကဖတ်နှင့်ဤအားပေးမှုကိုခံယူဖို့ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုပရောဖကျမြားခဲ့ကြသူအ 32 ယုဒနှင့်သိလတို့ကို, များစွာသောစကားနှင့်ညီအစ်များနှင့်ခိုင်ခံ့စေ၏။ 33 သူတို့အချိန်အတန်ကြာမျှခဲ့သည့်အခါကညီအစ်ကိုတွေသူတို့ကိုစလှေတျခဲ့သောသူတို့အားငြိမ်သက်ခြင်း၏နှုတ်ခွန်းဆက်စကားသူတို့နှင့်အတူနောက်ကျောကိုဆောင်ခဲ့ကြကုန်အံ့။ 35 ပေါလုနှင့်ဗာနဗသည်အန္တိအုတ်မြို့သို့, သှနျသငျ၌ နေ. နှင့်များစွာသောတခြားသူတွေနဲ့လျှောက်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကဟောပြောခြင်း။
ကအားလုံးကိုအနိုင်ရတစ်ဦးကဟုတ်မှန်သည့်မသိမမြင်နိုင်သောဆုံးရှုံးမှု၏ဇာတ်လမ်းနှင့်။0Läs allt!ဆုတောင်းပဌနာအဖြေများကို - Johan Gustafsson အစ္စလာမ်မစ)ရုပ်ပုံ: နေ့။ 2011 ခုနှစ်တွင်မာလီအတွက်အစ္စလာမ့်အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုကိုအယ်လ်ကေးဒါးတို့ကပြန်ပေးဆွဲခဲ့သူVärnamoမှ Johan Gustafsson, 42, ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးရုံဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြန်ပေးဆွဲ။ ပဲန်တီကော့စအသင်းတော်၌နေသောမိဘများပဌနာဖြေကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်!14Läs allt!မဟာရိတ်သိမ်းnils အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် သခင်ဘုရားပြုတော်မူမည်အရာကိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဗျာဒိတ်တော်: ကြီးစွာသောစပါးရိတ်ရာကာလ!29Läs allt!RFID ချစ်ပ်များ၏ Sanna ရဲ့အိပ်မက်အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် nils "ထိုအခါအကြှနျုပျသ chip ကိုကြိုက်နှစ်သက်မှ, stepwise (ဖြည်းဖြည်း), ဒါကြောင့်သူပြီးသားပရိုဂရမ်နှင့် brainwashed ထားပြီးဆိုလိုကြောင်းသိသည်။ "99Läs allt!"သားရဲ၏ လာ. ကွညျ့"အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် nils
Sanna: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Sanna: Den Stora Skörden Bertil Rosenius: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Leif Boman : Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Nils: Den Stora Skörden Bertil Rosenius: Den Stora Skörden Nils: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Tessy: Den Stora Skörden Lasse: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Elsa : Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Katrina: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet NT: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Katrina: Den Stora Skörden Sanna: Den Stora Skörden Leif Boman : Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Sanna: Den Stora Skörden Sanna: Den Stora Skörden Sanna: Den Stora Skörden Sanna: Den Stora Skörden David B: Katolska kyrkan förnekar att helvetet är en platsကလေးသူငယ်များမဲပေးရ?အစိမ်းရောင်ပါတီ Lorentz Tovatt ပါလီမန်မှာအာသနန်းစံ Romsons လက်ထောက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ 2013 ခုနှစ်တွင်သူသည်မဲပေးအသက်အရွယ်ဖျက်သိမ်းနှင့်ကလေးငယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးရသင့်ကြောင်းသင့်ကြောင်း Twitter တွင်ရေးသားခဲ့သည်!6Läs allt!ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံကိုအသငျးတျောကျော်တန်ခိအဘယ်ကြောင့်ငရဲကိုအသင်းတော်ကျော်တန်ခိုးမရှိရှိသနည်း သခင်ဘုရားသည် - ယေရှုခရစ်တော်၏မေရှိယကိုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ယရှေုသညျမေရှိယကို, သခင်ခဲ့လျှင်, အားလုံးငရဲအသငျးတျောကိုအုပ်စိုးခဲ့ကြပေသည်။3Läs allt!Aktuelltရှုပ်ထွေးသိပ္ပံပညာရှင်များဝဠာကြောင်း ..လေးမှားယွင်းသောဘာသာတရားများအတွက်ပုတီDen muslimska jungfru MariaEndast hos Jesus finns frälsningen - Femte delenသငျသညျလက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းတရားဒေသနဥပုသ်လ 15 ရက်အကြာမှာဦးသေဆုံးပြီး 1053မွတ်စ်လင် 10 နှစ်ကြားရှိဆရာများခေါင်းဖြတIS-blogg uppmanar till terror i Sverige666 ကုရ်အာန်စတင်12 ရက်အတွင်းနိုင်ငံပေါင်း 21 နိုင်ငံအတွက်ဿ